Dib ugu hel booskaaga iPhone-ka adoo adeegsanaya xeeladdan xariifka ah! | Wararka IPhone
Juan Colilla | | Wararka IPhone, Noticias, dhowr
Xeelad ka timid Reddit oo ballanqaadaysa booska ka bannee iPhone-ka Markaan ka sii baxeyno, xeeladdu waa xoogaa faahfaahsan oo miyir la 'maxaa yeelay waxay kicineysaa nidaam farsamo oo aan loo heli karin isticmaalaha inuu ku hawl galo gacanta.
Khiyaanadan ayaa ah mid aad waxtar u leh gaar ahaan kuwa haysta aalad 16GB ah, maadaama ay u nugul yihiin inay boos ka dhammaadaan inta ka hartay inta ka hartay, waana ay sameyn laheyd iPhone laftiisa ayaa nadiifisay "faylalka qashinka ah" ama keydka codsiyada aan waxtar lahayn ama aan muhiim ahayn, sidan ayaan ku soo kaban karnaa xitaa wax yar oo GB ah.
Xeeladdu waa mid aad u fudud oo ka kooban khiyaameeyaan nidaamka, tan awgeed waa inaan isku daynaa inaan kireysano filim qaadanaya meel bannaan oo ka badan intii aan haysanno, tusaale ahaan Sayidka siddooyinku: Labada Taar o Mars (Martianka) oo ku mashquulsan qiyaastii 6GB nooca FullHD.
Mar haddii tan la dhammeeyo, oo maadaama aynaan haysan meel ku filan, nidaamku wuxuu soo bandhigi doonaa farriin lagula talinayo inaynaan haysan meel ku filan oo hawsha lagu dhammaystiro, kirada la bixin maayo.
Intaas ka dib, nidaamka nadaafadda ayaa shaqo bilaabi doona wuxuuna bilaabi doonaa inuu faaruqiyo qaar ka mid ah keydadka si uu isugu dayo inuu booska banneeyo
Tani wax cusub ma ahan gabi ahaanba, waa qeyb ka mid ah warar horey u soo ifbaxay waqti hore, waxaan dhihi lahaa tan iyo iOS 5, waana qeyb ka mid ah dhacdadaas la yaabka leh ee qaar ka mid ah barnaamijyada shabakadaha bulshada (sida Facebook, gaar ahaan kan), wuxuu bedelay magaca astaantaada "Nadiifinta…" lamana furi karin inta hawshu socoto, tani maaha halyeeyo reer magaal ah, runti way dhacdaa inkasta oo ay aad u adagtahay in la arko, iyo in ka badanba haddaba markii qalabka keydka ee qalabkeenu aad u dhakhso badan yihiin in tirtirku ku dhammaado ilbiriqsiyo keliya. .
Habka waa lagu celin karaa inta jeer ee la doono, mar kasta oo la isku dayo in la soo dejiyo feyl ka weyn inta harsan ee ku harsan qalabkeenna.
Markii hore waxaa jiray codsi ku jiray AppStore oo la sheegay in lagu nadiifiyo keydka qalabkeenna, iyo waxa ay dhab ahaantii sameysay ku buuxi booska bilaashka ah xog aan kala sooc lahayn ilaa uusan jirin meel banaan, markaa macruufka ayaa hawlgeliyay qalabkan is-nadiifinta ah nidaamka laftiisuna wuxuu ahaa kii iskiis isu nadiifiyey, waa wax dad yar yaqaaniin, xitaa waxaan kala hadlay kuwa masuulka ka ah AVG shirkii hore ee World World kadib markay ii sheegeen inay diyaarinayaan codsi nadiifin ah oo loogu talagalay iphone.
Nasiib darrose waxay umuuqataa taas Apple uma ogola qaababka noocan ah arji dukaankaaga gudahiisa, waxaa laga yaabaa inay ugu wacan tahay inay si dadban u faragelinayaan macluumaadka dadka kale keydinayaan iyagoo tirtiraya faylasha, wax aan aaminsanahay inuu jebinayo xeerarka App Store.
Si kastaba ha noqotee, waa nidaam shaqeeya taasna waxaa adeegsaday barnaamijyo iyo barnaamijyo badan, maadaama ay hadda sidoo kale adeegsadeen barnaamijka nadaafadda iMyfone, barnaamij loogu talagalay Windows iyo OS X oo ka mid ah shaqooyinkiisa midkood ayaa qoraya feyl ka buuxinaya xusuusta aaladda macluumaad aan kala sooc lahayn ilaa uu isagu mas'uul ka noqdo nadiifinta keydkiisa.
Haddii aad isku dayday, noo sheeg, ma kuu shaqeysay?
Via - Reddit
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » Xeelad cusub ayaa kaa caawinaysa inaad dib u hanato booska markii aad ka hoosayso iPhone-kaaga
22 faallooyin, ka tag taada
Cajiib ah ,, mahadsanid, laga bilaabo 1.8 gb waxay u kacday 4.4. Markii aan furay iphone-kayga waxaan si cad u arkay safari, facebook instagram iyo barnaamijyo kale, oo ay yidhaahdeen, nadiifinta ...
Ku jawaab Kelin
Waad ku mahadsantahay sida aad noogu sheegtey khibradaada, had iyo jeer waa wax lagu farxo inaan ku caawiyo 😀
Ku jawaab Juan Colilla
Waan sameeyay oo maktabaddayda muusigga waa la tirtiray
Xaqiijiyay in gabi ahaanba aysan waxba dhicin.
Ku jawaab arialchevez
La xaqiijiyay in filimku adiga lagamuujiyay
Waxa ugu fiican waa JAILBREAK leh icleaner
Waxaan ku sameeyaa nadiifintaas Battery Doctor aniga oo aan halista ugu jirin inaan ku raro filimka bilaa xabsi iyo daqiiqad
Waxaan sidoo kale isticmaalaa Dhakhtarka Batariga oo si fiican ayuu u shaqeeyaa, maxaa yeelay waxaan isticmaalay xeeladdan mana helin wax faa'iido ah. Salaan.
Waxay shaqeysaa, laga bilaabo 2,5 illaa 4,5 iyo iyada oo aan wax lacag ah laga qaadin filimka
Dario Jimenez dijo
Wanaagsan waan qabtay waana hadii ay shaqayso, waxaan ku arkay degel kale oo way shaqaysaa waxaan kasbaday anigoo ku celceliyay 4 jeer 1,3 GB oo boos ah illaa iyo imikana meel walba waan ku hubsaday oo xogtayda oo dhami way taallo.
Jawaab Dario Jimenez
Beenta oo dhan, ninyahow!
Haddii ay shaqeyso, waxaan haystaa iPhone 4S markii aan howsha ku dhaqaaqana waxaan ka soo baxay inaan haysto 2.2Gb illaa iPhone-kayga. ilaa 7.1Gb. Sidoo kale u fiirso sida hoos timaadda codsiyada qaarkood eraygu wuxuu u soo baxay nadiifinta ... Qaddarka bannaan ee la sii daayay waxay u dhigmaysaa dhammaan khasnadaha ku jira qalabka, qaarna wax badan bay noqon doonaan kuwa kalena way yaraanayaan. Salaan
Ku jawaab Humberto
Hubiyay oo shaqeynaya waxay ka imaanayaan 1.3 ilaa 3.2 gb iyadoon filimka la rarin. Mahadsanid 🙂
Ku jawaab Ariadne
Weyn, runtii si fiican ayey aniga ila shaqaysay. Aad baad u mahadsan tihiin ragga!
Ku jawaab Roman
Cesitar Alvarado dijo
Marnaba halkan kama faalloonayo, laakiin way shaqaysaa, daqiiqad gudaheed waxaan ka socday 4.4gb oo la heli karo illaa 5.8gb la heli karo, xeelad aad u wanaagsan!
Jawaab ku sii Cesitar Alvarado
Waxaan kasbaday riwaayad anigoo howsha qabanaya, mahadsanid!
Si fiican ayey ii shaqaysay, waxaan ka soo baxay 2gb ilaa 6.2gb kadib 2 isku day oo aan kireystay filimka, ma rumaysan karo inaan qashin badan u haystay inaan nadiifiyo. Waan damiyay oo taleefanka gacanta ayaan ka cadeeyay layaabka iyo booska bilaashka ah dhib la’aan ayaa lagu hayaa
Ku jawaab Carlos.
djchucky 40 dijo
iga cafi jahligayga, waxaan ahaa ku raacsanahay mudo sanado ah laakiin meesha aad ka rabto inaad howsha ka qabato maxaa yeelay ma sameyn karo.
Waxay ka timid Iphone ama itunes.
Laga soo bilaabo itunes. Waxaad raadineysaa filimka "Labada Taar" waxaadna isku dayeysaa inaad kireysato.
Ku jawaab Arturo
Waad salaaman tahay, waa run oo la xaqiijiyey inay ka shaqeyso 169mb inaad tagto 1,5gb mahadsanid
La isku dayay Gabi ahaanba waa run. Waxaa lagu tijaabiyay iPhone 6 oo leh 9.3.1. Laga soo bilaabo 730mb waxaan aaday 1.8gb anigoo laba jeer ku celcelinaya.
Waxaad ku arkeysaa qoraalka "Nadiifinta" codsiyada ay nadiifisay. Way ku cadahay barnaamijka warbaahinta bulshada: whatsapp, twitter, linkedin ... markasta oo aad sameysid khiyaanada waxaad nadiifisaa barnaamij ka duwan.
Anigu ma haysto kaarka amaahda ee la xidhiidha koontadayda, markaa suurtagal ma ahayn inay iyagu lacag qaadaan.
Waad salaaman tahay, sidee ama halkee u aadaa filimkaa?
Hagaag, waxba iguma dhicin .. Weli waxaan haystaa 991 Mb oo bilaash ah: ((
Ku jawaab Charly
Apple wuxuu soo daayaa fiidiyowyada Autism-ka maalintiisa adduunka